नेपालमा कोरोना भाइरसबाट महिलाभन्दा पुरुष संक्रमित अत्यधिक – HK Tube Nepal
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कुल संक्रमितको संख्या २२ हजार ९ सय ७२ पुगेको छ। यीमध्ये पुरुष १९ हजार ३ सय ३१ (८४ प्रतिशत) जना छन्। महिलाको संख्या ३ हजार ६ सय ४१ (१६ प्रतिशत) छ।
एचके ट्युव नेपाल २६ श्रावण २०७७, सोमबार ११:११
काठमाडौं / नेपालमा कोरोना भाइरसबाट महिलाभन्दा पुरुष संक्रमित अत्यधिक देखिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कुल संक्रमितको संख्या २२ हजार ९ सय ७२ पुगेको छ। यीमध्ये पुरुष १९ हजार ३ सय ३१ (८४ प्रतिशत) जना छन्। महिलाको संख्या ३ हजार ६ सय ४१ (१६ प्रतिशत) छ।
डा. विजय ढकाल,मोलिकुलर विज्ञ
साउन दोस्रो सातासम्मको आँकडा हेर्दा ७० प्रतिशतभन्दा बढी पुरुष संक्रमित भएका राष्ट्रहरूमा भुटानबाहेक सार्कका सबै मुलुक पर्छन् । नेपालमा त झनै संक्रमित हुनेमा ८४ प्रतिशत पुरुष छन् । १६ प्रतिशत मात्रै महिला छन् । नेपालमा पुरुष बढी संक्रमित हुनुमा विभिन्न कारण छन् । कामको सिलसिलामा परदेश गएकाहरू धमाधम फर्किएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश पुरुष नै रहेको पाइन्छ ।
घरबाहिर निस्कने, घुमफिर गर्ने तर दूरी कायम नगर्ने प्रवृत्ति छ । मास्क नलगाउने, स्यानिटाइजर प्रयोग नगर्नेजस्ता बानी संक्रमणका लागि जोखिमपूर्ण छन् । सामान्यतः विकसित मुलुकहरूमा महिला बढी संक्रमित भएको देखिन्छ । जस्तैः अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, दक्षिण कोरिया, इटाली, स्पेन आदि ।
त्यस्तै बेल्जियम, नेदरल्यान्ड्स, स्कटल्याण्डमा संक्रमितमध्ये ६० प्रतिशत महिला छन् । कोरोना संक्रमणले गर्दा हुने मृत्युदर भने महिलाभन्दा पुरुषमा बढी देखिएको छ । यसको प्रस्ट कारण खुलेको छैन । वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गरिरहेका छन् । तर, हालसम्मको तथ्य केलाउँदा महिला र पुरुषको रोगसँग लड्ने प्रतिरक्षा क्षमता, आनुवंशिक तथा हार्मोनको फरक यसको कारक भएको अनुमान छ । हामीमा भएको X– क्रोमोजोममा प्रतिरक्षा क्षमतासँग सम्बन्धित जिनहरू खँदिलो रूपमा रहेका हुन्छन् । महिलामा भएको थप X– क्रोमोजोमले पुरुषको तुलनामा रोगसँग प्रतिरक्षा गर्ने क्षमता बढी बनाउँछ ।
जसले गर्दा महिलामा मृत्युदर कम भएको हुन सक्दछ । संक्रमणको क्रममा हाम्रो शरीरभित्र छिरेको कोरोना भाइरस प्रजननका लागि हाम्रो कोषिकाभित्र प्रवेश गर्नुपर्छ । हाम्रो कोषिकामा रहेको एस-२ (एन्जिओटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइम २) रिसेप्टरसँग कोरोना भाइरस बाँधिएपछि कोषिकाभित्र प्रवेश पाउँछ । एस-२ रिसेप्टर धेरै पाइने अंगहरूमा श्वासप्रश्वास, पाचन, हृदय, स्नायु, मूत्र प्रणाली पर्दछन् । संक्रमणबाट मृत्यु हुने कारण पनि यिनै अंगले काम नगरेर हुने गरेको देखिन्छ ।
पुरुषहरूमा एस-२ को मात्रा महिलाको तुलनामा बढी भएको पाइन्छ। त्यसैले होला कोरोनाको संक्रमणबाट महिलाभन्दा पुरुषको बढी मृत्यु भएको । महिलाहरूमा भएको कम मृत्युदरको अर्काे जिम्मेवार कारण लैंगिक हार्मोनहरू एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन र एन्ड्रोजेन हुन सक्दछन् ।
(अमेरिकाको टेक्सासस्थित सोनिक रेफरेन्स ल्याबको क्लिनिकल मोलिकुलर बायोलोजी विभागका निर्देशक डा. ढकालसँग अन्नपूर्णकर्मी दिनेश गौतमले गरेको कुराकानीमा आधारित)
लकडाउन खुलेपछि जनस्वास्थ्यविद्को चिन्ता – ‘संकट ल्याउन सक्छ’